चौंरीदेउरालीका अशक्तलाई घर–घरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता - Drishti Khabar
प्रकाशित मिति: बिहिबार, आश्विन १४, २०७८ | १८:१५:३४
चौंरीदेउराली- काभ्रे जिल्लाको चौंरीदेउराली गाउँपालिकाका बृद्ध–बृद्धा र शारीरिक अशक्त भएका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता घर–घरमै पुगेर वितरण गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष दिननाथ गौतमको विशेष पहलमा उनीहरूलाई बुधवारबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता घर–घरमा वितरण गर्न थालनी भएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७७।०७८ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैङ्कसम्म पुगी लिन नसक्ने लाभग्राहीहरूलाई गाउँपालिका, वडा कार्यालय र एन.सी.सी. बैङ्क चौंरीदेउराली शाखाको समन्वयमा घरदैलो मै पुगेर हात हातमा वितरण गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष गौतमले जानकारी दिए ।
यो कामको सुरुवात चौंरीदेउराली गाउँपालिका वडा नं. ७ माँदनकुडारीबाट सुरुवात गरेको छ । यहाँका ८० वर्ष माथिका वृद्ध–बृद्धा र ‘क’ वर्गको अपाङ्गता भएका लाभग्राहीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष गौतमले जानकारी दिए ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता दया वा मायाले पाउने नभई उनीहरूको अधिकार भएकोले घर–घरमै पुगेर वितरण गरेको गौतमले बताए । ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता कुनै दया वा माया लागेर दिएको भत्ता होइन, यो उहाँहरूको अधिकार हो ।’ उनले भने, ‘जीवन भर उहाँहरूले राष्ट्रको लागि ठूलो योगदान पुर्‍याउनु भएको छ । जिउँदो इतिहास हुन् उहाँहरू । त्यसैले बैङ्कसम्म पुग्न नसक्नेलाई घर–घरमा पुर्‍याउनु स्थानीय सरकारको दायित्व हो । त्यहीं दायीत्व हामीले पूरा गरेका हौं ।’
यो अभियान प्रत्येक वडामा सञ्चालन गर्ने अध्यक्ष गौतमले जानकारी दिए । सामाजिक सुरक्षा भत्ता घर–घरमै पाएपछि लाभग्राहीहरू खुसी भएका छन् ।